Tenzin Dolkar wuxuu ku biiray McKnight bishii Marso 2021 isagoo ahaa sarkaal barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta (MC&E). Dolkar wuxuu la shaqeeyaa kooxda MC&E si uu u qaabeeyo una hago dhabbaha dadaallada cimilada ee aasaaska. Waxay kormeertaa oo horumarisaa xayeysiisyada deeqaha ee taageera dadaallada lagu dhisayo awoodda iyadoo loo marayo iskaashi, iyadoo la waafajinayo cimilada iyo ujeeddooyinka sinnaanta ee McKnight.
McKnight ka hor, Dolkar wuxuu lataliye dhanka cimilada u ahaa Magaalada Minneapolis iyada oo loo marayo iskaashiga Golaha Difaaca Kheyraadka Dabiiciga ah ee iskaashiga la leh Bloomberg Philanthropies Tartan Cimilada Magaalooyinka Mareykanka. Doorkaas, waxay la shaqeysay Xafiiska Magaalada ee Waaritaanka iyo Waaxda Howlaha Guud si loo dardargeliyo gaadiidka iyo dadaallada dhismaha ee loogu talagalay dhimista saameynta sare ee qiiqa gaaska lagu sii daayo. Waxqabadyadan waxaa ka mid ahaa naqshadda magaalada ee lagu gaarayo 100 boqolkiiba koronto la cusboonaysiin karo sannadka 2030 iyo, iyada oo loo marayo koodh dhismeedyo ka wanaagsan kuwa gobolka oo dhan, tamar-saab-eber ah oo ah halbeegga dhammaan dhismooyinka ganacsi ee cusub sannadka 2036.
Astaamaha Tenzin Dolkar Febraayo 2021